Diploma in Business Management (DBM) နှင့် Diploma in Finance & Banking (DFB) | Mizzima Myanmar News and Insight
Diploma in Business Management (DBM) နှင့် Diploma in Finance & Banking (DFB)
Diploma in Business Management (DBM) နှင့် Diploma in Finance & Banking (DFB) အစရွိတဲ့ Business နှင့် Finance & Banking ဘာသာရပ်တွေကို လေ့လာသင်ယူပြီး Diploma ဘွဲ့ရယူလိုသူတွေအတွက် အချိန်ပိုင်းသင်တန်းတွေကို STI Myanmar University ၏ ( Yangon Campus II ) ရွှေဘုံသာတွင် November လမှ စတင်ဖွင့်လှစ် ပေးသွားမှာပါ။
STI Myanmar University ၏ ရွှေဘုံသာ Campus တွင်သင်ကြားပို့ချနေသော Certificate, Diploma, Advanced Diploma အချိန်ပိုင်းသင်တန်းများမှတဆင့် University of Bedfordshire, UK မွ BA(Hons) Business Administration နှင့် BA(Hons) Accounting - Final Year အတန်းသို့တိုက်ရိုက်ပေါင်းကူးတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
STI Myanmar University ရဲ့မိတ်ဖက်တက္ကသိုလ်ဖြစ်တဲ့ University of Bedfordshire (UoB) ဟာ ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ အစိုးရ တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင် လက်ရှိမှာ ကျောင်းသား ၂ သောင်း ၄ေထာင် တက်ရောက်လျက် ရှိပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်လည်း ကျောင်းသား ၃၀၀၀ ကျော ်ရှိသော အထင်ကရတက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု ဆုတံဆိပ်ဖြစ်တဲ့ The Queen’s Award အပြင် အခြားဆုတံဆိပ်ပေါင်းများစွာ နွစ်စဉ်ရရှိထားပြီး အစဉ်အလာမပျက် အောင်မြင်မှုများနဲ့ ထုံမွှမ်းထား တဲ့ အဆင့်မြင့် တက္ကသိုလ်ဖြစ်တဲ့ UoB ကနေ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းဘွဲ့ကို အခုပဲရယူလိုက်ကြပါစို့နော်။
၁၂ သိန်း ၉ သောင်း ကျပ် (စာမေးပွဲကြေးထပ်မံ ပေးသွင်းရန်မလို)
1st Installment - ၂သိန်း ၉သောင်းကျပ်
2nd Installment to 6th Installment - ၂ သိန်းကျပ်စီ
စေန - နေ့လည် ၁၂ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီ ထိ
တနင်္ဂနွေ- မနက် ၉ နာရီခွဲ မှ ညနေ ၄ နာရီခွဲ ထိ
တနလၤာ မွ ေသာၾကာ - မနက် ၉ နာရီ မှ နေ့လည် ၁၂ နာရီ ထိ
7. Decision Making Techniques
တနဂၤေႏြ - မနက် ၉ နာရီခွဲ မှ ညနေ ၄ နာရီခွဲ ထိ
3. Banking Fundamentals
5. Principles of Financial Management-I
6. Decision Making Techniques
Mizzima Updates News ( 04.10.20 )
တရားမဝင် ကိုဗစ် စစ်ဆေး ကိရိယာများ အသုံးမပြုသင့်ဟု ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင...